Ithegi: intengiso yemveli » Martech Zone
Ithegi: intengiso yemveli
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ngamanye amaxesha siyalibala ukuba singene nzulu kangakanani kwishishini kwaye silibale ukunika umntu intshayelelo kwisigama esisisiseko okanye ii-akhronimi ezijikelezayo xa sithetha ngentengiso ekwi-Intanethi. Ngethamsanqa kuwe, uWrike ubeke le ntengiso ye-Intanethi kwi-101 infographic ehamba kuwo onke amagama asisiseko entengiso ekufuneka ubambe incoko kunye nengcali yakho yentengiso. Umanyaniso lweNtengiso -Ufumana amaqabane angaphandle kwintengiso yakho
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ukufumana isixhobo esikhuthazayo esifanelekileyo esingafikeleli kubaphulaphuli kuphela kodwa esidala unxibelelwano nababukeli kuyinto enzima. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, abathengisi bebegxile kulo mba, kuvavanywa kwaye kutyalomali kwiindlela ezahlukeneyo ukuze babone ukuba yeyiphi eyona isebenzayo. Kwaye kungothusi mntu, ukuthengisa umxholo kubambe indawo yokuqala kwihlabathi lentengiso. Uninzi lucinga ukuba ukuthengisa umxholo bekujikeleze kuphela ezimbalwa ezidlulileyo
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ukuba uburhweba iimveliso zakho ixesha elide kungekho ziphumo zintle, mhlawumbi lixesha lokuba uthathe ingqalelo kwintengiso yemveli njengesisombululo esisigxina kwiingxaki zakho. Iintengiso zemveli ziya kukunceda, ngakumbi xa kufikwa ekunyuseni iintengiso zakho zentlalo kunye nokuqhuba abasebenzisi ojolise kubo kumxholo wakho. Kodwa kuqala, masingene kwizinto zentengiso zomthonyama ngaphambi kokuba sicinge ngendlela.
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Njengoko bekutshiwo ngaphambili kuyo yonke into ekufuneka uyazi malunga neArtificial Intelligence kunye neempembelelo zayo kwi-PPC, eNative, nakwiNtengiso yokuBonisa, eli linxalenye ezimbini zamanqaku ezijolise kwimithombo yeendaba ehlawulelweyo, ubukrelekrele bokwenziwa kunye nentengiso yemveli. Ndichithe iinyanga ezininzi ezidlulileyo ndiqhuba isixa esikhulu sophando kwezi ndawo ziye zafikelela kupapasho lweencwadi ezimbini zasimahla. Eyokuqala, Yonke into ekufuneka uyazi malunga neNtengiso yoHlahlo kunye neArtificial Intelligence,